क्वारेन्टाईनबाटै २२ वर्षिया महिला प’रपुरुषसँग पाेईला भा’गिन्,यस्तो छ प्रेम काहानी – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/क्वारेन्टाईनबाटै २२ वर्षिया महिला प’रपुरुषसँग पाेईला भा’गिन्,यस्तो छ प्रेम काहानी
क्वारेन्टाईनबाटै २२ वर्षिया महिला प’रपुरुषसँग पाेईला भा’गिन्,यस्तो छ प्रेम काहानी
3,4263minutes read
काठमाडौँ – यति बेला विश्वभर कोरोनाको महामारीले मानिसलाई आ’क्रान्त बनाइरहेको छ। विशेष गरी कोरोनाबाट ब’च्नको लागि देश भरि लक् डाउन लगाइएको छ। यस्तो बेलामा पनि बेला बेलामा रोचक तथा अनौठा घटना हरु घट्ने गरेको छ।केहि समय अघि मात्र श्रीमतीलाइ ढाटेर प्रेमिकालाइ भेट्न जादा कोरोना सरेको कोरोनाको बेला अनलाइन बिबाह जस्ता घटनाले पनि मानिसको ध्यान तानेको थियो। यस्तै रोचक घटना नेपालमा पनि घटेको छ।
क्वारेन्टाईनमा संगै बसेका अर्का पुरुष संग चितवनकी २२ वर्षीय गंगा भ्लोन भागेर गएकी छिन् । काठमाडौँबाट तिन दिन हिडेर जादा बाटोमा एक अर्का मन परेको र बिस्तारै माया लाग्न थाले पछि पर पुरुष संग भागेकी हुन् । चितवन पुगेका उनी क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएको र एकाएक भा’गेर गएको उनको आफ्नै दिदीले बताइन् । तर उनलाई प्रहरीले २४ घण्टा नबित्दै प’क्रा’उ गरेको छ ।
बहिनिको दुई सन्तान पनि भएको र श्रीमानसंगै रहेको बताइन् । काठमाण्डौं देखि पैदल हिंडेर जाने क्रममा नै बहिनीको ती पुरुषसँग सम्बन्ध बढेको कुरा अहिले आएर चाल पाएको कुरा समेत उनकी दिदीले रुँदै बताएकी छिन् । गंगाकी दिदीसंग यस विषयमा गरिएको कुराकानी गरिएको छ। गंगाकि दिदिको अनुसार उनीहरु श्रीमान श्रीमतीको पछिल्लो अबस्थामा सम्बन्ध बिग्रिदै गएको थियो।
केहि महिना अगि बाट बुढा चितवनमै रहेको र गंगा काठमाडौँमा बस्ने गरेको पनि उनकी दिदीले खुलाएकी थिइन।आखिर कसरी भा’ग्न सफल भइन त गंगा?? उनकी दिदीको अनुसार राति बाट नै उक्त पुरुष र गंगा यता र उता गर्ने , आखाको इशारा गर्ने गरेको थाहा भएको थियो । र एक बिहानै दुवै जना क्वारेन्टाईनबाट सुरक्षा कर्मिको आखा छक्याएर भागेको बताएकी छिन्।
धेरै पर्खिदा पनि दुवै जना नआएपछि दिदीले बाध्य भएर प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन र प्रहरीले खोजि गरेपछि उनीहरु भाग्ने क्रममा चितवन भन्दा पर पक्राउ परेका छन्।
कैलाली, जेठ २२ । लकडाउनमा पनि दुर्घटनाको दर रोकिएको छैन । बाँकेमा ११ जनाको निधन भएको दुखद खबर सेलाउन नपाउँदै फेरी लालीको गौरिफन्टा नाकामा यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । भारतको रत्नागिरीमा अलपत्र परेको नेपाली बोकेर कैलालीको गौरिफन्टा नाका आउदै गरको बस दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घटना बुधबार राती नासिकमा भएको हो । उक्त दुर्घटनामा ड्राइभर सहित चार जनाको घटना स्थलमै मृत्यु भएको छ । घाइतेहरुको संख्या घेरै रहेको र केहि घाइतेहरुको अवस्था गम्भिर रहेको जनाइएको छ । मृतक तथा घाइतेको विवरण आउन बाँकी । घटनाका विषयमा थप जानकारी आउन बाँकी छ ।
सपनिमा नाग देवताको दर्सन गर्नु भयो भने ,यस्ता हुन्छन संकेतहरू ॐ लेखेर एक SHARE गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ !ॐॐॐ!!!